I-squall, yakhiwa kanjani futhi iyini imiphumela yayo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Esimweni sezulu esidumile sivame ukuhlangabezana nemiqondo edidayo engaholela ekutheni senze amaphutha. Omunye wale mibono ngukuthi ishawa. Sihlobanisa nezimvula ezinamandla ezinezici ezithile. Ukudida imvula neziphepho, imvula enamandla, njll. Kuvamile impela enkulumweni yansuku zonke.
Yilokho okushiwo le ndatshana. Lapha sizoxazulula ukungabaza ngokuthi iyini ishawa nokuthi yiziphi izici zayo eziyinhloko.
2 Umehluko nezinye izinhlobo zemvula
3 Izingxenye ze-squall
4 Ukwanda kwezihlambi emhlabeni jikelele
Yigama elingabonakala lingenangqondo lisetshenziswe ngendlela ehlelekile. Kubukeka njengokujwayelekile kolimi olungakahleleki noma uhlobo lwesisho solimi. Noma kunjalo, I-chubasco igama elisemthethweni laseSpain. Ivela ngesiPutukezi «chuva» okusho ukuthi imvula. Ngakho-ke, singasho ukuthi ishawa yimvula enezici ezikhethekile.
Leli gama lazalelwa ukukwazi ukuhlukanisa ubukhulu bemvula noma umfutho imvula ewela ngawo. Kuyinto efana nalokho okungabizwa ngokuthi yishawa. Kuvame ukusetshenziselwa ukuchaza izimo zezulu ezinemvula lapho ziwa kakhulu kepha isikhathi esifushane. Imvamisa, lezi zimvula zibangelwa ukwakheka kwezinqe noma ukungazinzi komkhathi. Imvamisa kunezinkinga ezithile ezihlobene nomswakama nengcindezi ephezulu emvelweni
Umehluko nezinye izinhlobo zemvula
Umehluko omkhulu onawo nezinye izinhlobo zemvula enwetshiwe ukuthi ishawa livame ukuvela kungalindelekile. Kuyinkimbinkimbi ngokwengeziwe ukuthi izazi zezulu zibikezele ukuthi ishawa izokuwa nini. Imvula ayilindelekile nhlobo futhi, isikhathi esiningi, yehla ngamalitha amaningi kabi ngemitha eyisikwele, kepha iphela ngemizuzu nje embalwa. Lokhu yikho okwenza kube nzima kuma-radar ukuyithola.
Ungabona kancane noma kancane iphethini engaholela ekuhlanzeni, kepha imvamisa ayilungile. Ngalesi sizathu, kujwayelekile ukumemezela embikweni wesimo sezulu ukuthi kuzoba nemvula ngaphandle kokuba nayo. Lolu hlobo lwemvula lunolaka impela futhi lubandakanya inani elikhulu lamanzi ngesikhathi esifushane. Ngenxa yalokhu, imigwaqo igcwala ngokushesha okukhulu futhi ingadala izinhlekelele kubantu.
Imiphumela yokuqala ukubhujiswa noma ukugcwala kwamagaraji nezindlu ezingaphansi. Uma ukugeleza noma umthambeka wendawo lapho ishawa iwela khona kuphezulu, kungenzeka ukuthi idonse imoto noma idilize izindonga ezindala. Kumele sikunake ukuthi, noma ngabe kuyimvula emfushane ngesikhathi, umfutho nomthamo wamanzi owayo uphezulu kakhulu. Lesi yisici esiveza ubungozi obukhulu.
Imvula inganweba amahora angeke abe yingozi inqobo nje uma ingawi kakhulu. Ngokuphambene nalokho, imvula enhle kunazo zonke ehlala isikhathi eside futhi engenamandla kangako, ukuze ikwazi ukugcwalisa ama-aquifers futhi ingene inhlabathi ngaphandle kokulimaza izitshalo noma izitshalo.
Sizohlaziya izici nezakhi zeshawa. Njengoba silibangise e-Ecuador, izihlambi zemvula ziya ziba njalo futhi zivamile.Lokhu kufanele kwenziwe, njengoba sishilo ngaphambili, ngoba yizimo zezulu ezihambisana nezimo zezulu ezizinzile nezifudumele. Enhlonhlweni yethu sijabulela isimo sezulu esimnandi esinamazinga okushisa aphakeme nokungazinzi okuthile ezibangela ukuvela kwalezi zenzakalo.
Enye yezindlela zokubikezela ukuthi ishawa izofika kulapho sibona ukwakhiwa kwamafu amnyama kakhulu, umoya uqala ukuba namandla kakhulu futhi nesichotho singawa. Kukulezi zimo lapho kuzoqala khona ukungazinzi okukhulu komkhathi okuzoholela eshaweni. Kulesi simo, kungcono ukuthi uphephe, ngoba futhi kuvame ukuza kuhambisana nokuhamba izivunguvungu zikagesi.
Ngemuva kokuhlala imizuzu embalwa, isibhakabhaka siyacaca futhi nelanga liyaphuma. Izinga lokushisa livame ukuba mnandi ngokwengeziwe ngemuva kokwehla kokuthi lihlupheke lapho kufika lo mkhuba. Zonke lezi zinto zenza ukuthi ishawa kubelula ukubona. Ngaphezu kwakho konke, uma sazi izifunda lapho zivame ukwenzeka khona, kulula ukubikezela ukuthi zizohlala isikhathi esingakanani nokuthi singazithola kangaki. Ezimweni zezulu ezipholile, imvamisa okwenzeka ngayo lo mkhuba nayo iyanda.
Konke okungenhla kukhombisa lokho ukungazinzi kuyanda emhlabeni jikelele.
Ukwanda kwezihlambi emhlabeni jikelele
Ukungazinzi kwesibhakabhaka kuhambisana namazinga okushisa aphezulu, umswakama othe xaxa. Ukuguquka kwesimo sezulu okwenzeka ezingeni lomhlaba jikelele kwandisa amazinga okushisa aphakathi komhlaba. Ngakho-ke, kungashiwo ukuthi kusho ukunwetshwa kwezindawo ezishisayo kuya ngaphakathi kwezingongolo. Lokhu kungahumusha ekukhuleni okungaba khona ezindaweni lapho kungahle kube khona izihlambi ezinezici ezifanayo nalezo eziseduze ne-Equator.
Lesi yisizathu esenza ukuthi, eSpain, ukuba khona kwalezi zimo zemvula emfushane kepha enamandla kukhula. Njengoba kunjalo nokushisa nomswakama, kanjalo nokungazinzi komkhathi okuhambisana nakho. Ngakho-ke, singakusho lokho, njengoba kunezindawo eziningi "ezishisayo" ezine amandla okwenyuka kokungazinzi komkhathi, kuzoholela ekwandeni kwezihlambi.
Lona ngomunye wemiphumela okulethwa ukuguquka kwesimo sezulu. Imvamisa yalezi zimo izokwanda kuphela ezindaweni ezibhekwa njengezimo zezulu ezipholile, kepha namandla azo azokwanda. Amandla aphakeme angadala umonakalo ongaphezulu kanye nobungozi obuningi. Kulokhu sengeza ukuthi izihlambi kunzima kakhulu ukubikezela, ngakho-ke ukuphela kwento esingayenza, ukuguqula ukwakheka kokuhlelwa kwedolobha ukuze kubonakale kusengaphambili ngezenzo zemvula.
Enye into esingayenza ukuthuthukisa amasistimu ethu okubikezela ngalezi zimo ukuze sikwazi ukulindela nokuthi kungabikho muntu "ongazelele" ngalezi zehlakalo ezinzima.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi kuyacaca ukuthi iyini ishawa nezici zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Ukugeza